कम्पनीबाट ठँगिदा परदेशमा एक नेपाली अलपत्र, नेपाल आउन चाहान्छन् तर दुतावासले नाम सुन्ने वित्तिकै फोन काटिदिन्छ
Homeसमाचारकम्पनीबाट ठँगिदा परदेशमा एक नेपाली अलपत्र, नेपाल आउन चाहान्छन् तर दुतावासले नाम सुन्ने वित्तिकै फोन काटिदिन्छ
October 6, 2020 admin समाचार 8306
विदेश गएर टन्नै पैसा क’माउने सपना देखेका शि’वको सपना चकनाचुर मात्र भएको छैन उनले विदे’शमा नपाउनु दुःख समेत पाएका छन् । त्यसरी दुःख पाउने ती युवा बारा जिल्ला’का शिव बच्चन साह रौनियार हुन् । उनी गएको मार्च म’हिनामा युनाइ’टेड अरब इमि’रेट्स (युएई) पुगेका थिए ।
शिवले का’ठमाडौँमा रहेको स्प्रिङ नेपाल ह्युमन रि’सोर्सेज म्यानपावर कम्प’नीसंग सम्पर्क गरेर लि’गल रुपमै उक्त कम्प’नीलाई २ लाख रुपैँया बुझा’एर युएई पुगेका थिए । पठाउने कम्प’नीले उनलाई ‘अफिस ब्वाइ’ र ‘प्लस्ट’रको काम’ भनेको थियो । त्यसमै ढु’क्क भए उनी ‘क्रिस्टल फर सिर’मिक कम्पनी’ मा गए ।
त्याहाँ पुगेका शि’वले नेपालको म्या’नपावर क’म्पनीले भने अनुसारको काम पाएनन् । उन’लाई टाइल र मार्ब’लको काम लगाइयो । काम थालेको २ घ’ण्टामै उनी निकालिए । काम नजा’नेको भनेर कम्पनीको मान्छेले उनलाई का’मबाट निकालेर अब काममा नआ’उनू भन्यो ।
कामबाट निका’लिएपछि शिव केही दिन सड’कमै भौँतारिए । युएईमै रहेका एजेन्ट हरि’भक्त बिष्टले फेरि काम खो’जिदिए तर, भिसा नभएको भनेर कम्प’नीले राख्न मानेन । शिव युएई पु’गेको सात महिना भइसकेको छ । उनी घर फर्किन चाहन्छन् । युएईस्थित नेपाली दूतावासले टिक’टको व्यवस्था गरेर दूतावा’सकै गाडीमा दुई पटक वि’मानस्थल पुर्‍यायो तर, उनी विमान चढ्न पाएनन् ।
उनी का’ममा गएको कम्प’नीले उनलाई १२ हजार दिराम ज’रिवाना लगाएर केस चलाए’को छ । त्यो जरि’वाना नतिरी उनी युएई छाड्न पाउँदैनन् । विमानस्थ’लबाट फर्किनु परेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० ले उनका लागि खाने र बस्ने व्यव’स्था गरेको थियो ।
एनआ’रएनए प्रति’निधिले युएईमा रहेका एजेन्ट बिष्टलाई सम्पर्क गरेर ३ हजार ५ सय दिराम कम्प’नीलाई दिने सहमति गरायो र कम्प’नीमा बुझा’उन लगायो । बाँकी ८ हजार ५ सय दिराम कम्पनीमा नबुझाई आफूले युएई छाड्न नपाउने शिवले बताएका छन् । शिवको भनाई अनुसार सहयोग’कोलागी दुतावा’समा फोन गर्दा आफ्नो नाम सुन्ने बित्तिकै दुतावा’सले फोन काटिदिन्छ रे ।
आफु जसरी भएप’नि नेपाल फर्कने शि’वको भनाई छ । त्यसकोलागी शिवले सबै’लाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । अहिले उनी एनआरएन युएईको संरक्षणमा छैनन् । एनआ’रएनए युएईका उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले शिवलाई अत्या’वश्यक सबै सा’मग्री दिएर रा’खेको तर उनी आफैँ हिँडे’को बताए । -इताजा खबर बाट
डा. केसीसँग वार्ताका लागि चौतर्फी दबाब
एकै पटक जन्मिएका ५ शिशु यसरी हुर्काइदैछ (भिडियो हेर्नुहोस्)
सक्किगोनीमा बलेकाे डबल रोल भएको गीतमा जुम्लिया दिदि बहिनि (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 30, 2021 admin समाचार 4407
सागर लम्साल बले र ट्विन्स दिदी बहिनी प्रिज्मा प्रिन्सी खतिवडा अभिनित म्युजिक भिडियो सार्व’जनिक भएको हो । ‘आएन चाइनाको रेल’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सागरको अ’फिसीयल युट्युब च्यानल बले एन्टरटेन्मेन्ट बाट सार्वज’निक गरिएको हो ।
झापामा श्रीमानले पा ‘सो लगाएपछि गा’यव श्रीमती रुँदै आइन् मिडियामा (भिडियो सहित)
March 8, 2021 admin समाचार 3445
झापामा विदेशवाट एक साता न’पुग्दै एक पुरुषले दे’ ह त्या ग गरेको घट’नामा सम्पर्क वि’हिन भएको भनिएकी उनको श्रीमती पनि सार्व’जनिक भएकी छन् । श्रीमान १५ बर्ष पछि बिदेशवाट नेपाल फ’र्किएका श्रीमानले एक साता नबि’त्दै
अ’चानक के भयो कल्पना दाहाललाई ? डाक्टरले दिए यस्तो सुझाव
April 5, 2021 admin समाचार 3797
नेपाली लोक गायनकी पछिल्लो समयकी च’र्चित गायिका कल्पना दाहालको स्वा’स्थ्यमा समस्या देखिएको छ । कमजोरीका कारण उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको हो । चिकित्सकको स’ल्लाह अनुसार उनी अहिले घरमै आराम गरिरहेकी छिन् । उनलाई इन्द्रेणीकि लोक
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215253)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207008)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206666)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (205578)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204373)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203610)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201857)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201699)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194006)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170790)